विश्वकै सबैभन्दा फोहारी व्यक्ति जसले ६० वर्षदेखि नुहाएका छैनन्…. – Namaste Host
February 13, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on विश्वकै सबैभन्दा फोहारी व्यक्ति जसले ६० वर्षदेखि नुहाएका छैनन्….
कुनैपनि व्यक्ति जसले ६० बर्ष देखि ननुहाई बसेका छन् भन्ने सुन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।तर, विश्वमा यस्ता व्यक्ति भेटिएका छन् जो ६० बर्ष देखि ननुहाई बसेका छन् । यो प्रसङ्ग इरानको हो । सामाचार माध्यमहरुमा जनाईएअनुसार, इरानका ८० वर्षीय अमो हाजीले ६० वर्षयता नुहाएका छैनन् ।
६० वर्षदेखि ननुहाएर उनि विश्वकै सवैभन्दा फोहरी व्यक्ति बनेका छन् । पनि उनलाई आफ्नो अनुहार सुन्दर लाग्छ ।